လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဖို့အကြီးမားဆုံးခြိမ်းခြောက်မှုနည်းပညာတက္ကသိုလ်ကနေလာကြ - သတင်း Rule
တွင်းနက်မှာမိမိဘီဘီစီ Reith ပို့ချချက်များ၏ရှေ့မှောက်၌ Talking စတီဖင်ဟော့ကင်းတိုးတက်မှုအတွက်အညစ်အကြေးအန္တရာယ်နှင့်လည်းမြေကြီးပေါ်မှာအဖြစ်ဆိုးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဆှေးနှေး.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “လူသားအများစုမှာခြိမ်းခြောက်မှုများသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကိုမှလာ, ဟော့ကင်းကသတိပေး” Ian ကနမူနာသိပ္ပံအယ်ဒီတာကရေးသားခဲ့သည်, The Guardian ကအင်္ဂါနေ့တွင် 19 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလများအတွက် 2016 00.01 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုအစဉ်အဆက်ကြီးမြတ်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်လာအဖြစ်လူသားမျိုးနွယ်သေးတဦးက၎င်း၏အန္တရာယ်အများဆုံးရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်နေရ, စတီဖင်ဟော့ကင်း သတိပေး.
ဂြိုဟ်သည်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဘေးအန္တရာယ်များ၏အခွင့်အလမ်းကိုလာမည့်တထောငျတဆယ်နှစ်ထဲမှာအနီးသေသေချာချာမှထမြောက်ကြလိမ့်မည်, အထင်ပေါ်ကျော်ကြား cosmologist ကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်လူသားတွေကြယ်တို့တွင်အသက်ရှင်နိုင်ဘယ်မှာအာကာသအတွင်းကိုလိုနီထူထောင်ရန်ရာစုနှစ်ထက်ပိုမိုကြာမြင့်မည်.
"ကျနော်တို့တရာမှာအနည်းဆုံးနောက်လာမည့်နှစ်ပေါင်းအာကာသအတွင်း Self-ထောကိုလိုနီတည်ထောင်မည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီကာလအတွက်အလွန်သတိထားရန်ရှိသည်,"ဟော့ကင်းကပြောပါတယ်. သူ၏ထင်မြင်ချက်များကိုသခင် Rees သူတို့ echo, အနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်တော်ဝင်, အဘယ်သူသည်အတွက် Self-ဖကျြဆီးခွငျး၏အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်. သူ၏ကိုယ်ပိုင်စိုးရိမ်ပူပန်ကြီးပြင်း 2003 စာအုပ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးရာစု.
Related: စတီဖင်ဟော့ကင်း: '' သင်ကအနက်ရောင်အပေါက်၌ရှိကြ၏ခံစားရလျှင်, တက်မပေးပါဘူး. တစ်လမ်းထွက်ရှိပါတယ်။’
ရှေ့ဆက်ဘီဘီစီ Reith သင်ကြားပို့ချချက်များ၏ရေဒီယို Times ကစကားပြော, သူကအနက်ရောင်တွင်း၏သိပ္ပံပညာကိုရှင်းပြလိမ့်မည်သည့်အတွက်, ဟော့ကင်းလူသားမြားသညျယခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုအများစုကိုသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုကနေလာကပြောပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောနျူကလီးယားလက်နက်များနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအင်ဂျင်နီယာဗိုင်းရပ်စ်အဖြစ်.
"ကျနော်တို့ကတိုးတက်မှုရပ်တန့်သွားကြသည်မဟုတ်, သို့မဟုတ်ပါကနောက်ပြန်လှည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အန္တရာယ်များအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်သူတို့ကိုထိန်းချုပ်ရပါမည်,"ဟုသူကဆက်ပြောသည်.
အဆိုပါကင်းဘရစ်သိပ္ပံပညာရှင်, အဘယ်သူသည်လှည့် 74 ယခုလအစောပိုင်းက, သူကအသက်မှာမော်တာအာရုံခံရောဂါ၏ပုံစံကိုတိုးဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ရှားပါးခဲ့သင်ယူသောအခါသူ့အမျှော်လင့်သုညလျှော့ချခဲ့သည်ဟုဆိုသည် 21. ဒါပေမဲ့ထက်ပိုမိုအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ် 50 ရောဂါကတည်းကနှစ်ပေါင်း, သူဟာနီးပါးသည်အခြားလမ်းအတွက်အရမ်းကံကောင်းခဲ့ဟုဆိုသည်. သီအိုရီရူပဗေဒ၏ဟော့ကင်းရဲ့ဧရိယာထဲမှာ, မိမိအမသန်စွမ်းမှုကအဓိက Handicap မဟုတ်ခဲ့.
မိမိအဝိညာဉျကိုတက်စောင့်ရှောက်သောအရာကိုမေးမြန်းရာ, သူသည်မိမိအလုပ်နှင့်ဟာသ၏အာရုံအမည်ရှိသော. "ဒါဟာအမျက်ထွက်ဖြစ်လာမှမဟုတ်လည်းအရေးကြီးပါတယ်, နေပါစေဘဝကိုသည်မည်မျှခက်ခဲ, သင်ကိုယ်သင်မှာယေဘုယျအားဖြင့်အသက်တာမှာရယ်မောမနိုင်လျှင်အားလုံးမျှော်လင့်ချက်ဆုံးရှုံးနိုငျသောကွောငျ့။ "
သုံးဆယ်နှစ်ပေါင်းဟော့ကင်းသင်္ချာ၏ Lucasian ပါမောက္ခခဲ့သည်, တခါဣဇာက်သည်နယူတန်အားဖြင့်ကျင်းပမယ့် post ကို, နှင့်တိုင်းပြည်အတွင်းအများဆုံးဂုဏ်သတင်းပညာသင်နှစ်ရာထူးများထဲမှတစ်ခု. သို့သော်ဟော့ကင်းကသူလီလီယိုဂါနီးကပ်လာခံစားခဲ့ရကပြောပါတယ်, 16 ရာစုနက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်, အဘယ်သူသည်တိကျခိုင်မာစွာလေ့လာတွေ့ရှိချက်နဲ့သူ့ရဲ့အချိန်ကိုလက်ခံရရှိသည်ပညာကိုမှောက်. တစ်ဦးအချိန်စက်ပေးထား, ဟော့ကင်းကသူနှင့်တွေ့ဆုံရန်အချိန်အတွက်ပြန်ခရီးမယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်အဖြစ်လီလီယိုအမည်ရှိသော.
ဟော့ကင်းမှုကြောင့်ဆင်းရဲသားကိုကျန်းမာရေးကိုနိုဝင်ဘာလအတွင်း Reith သင်ကြားပို့ချချက်များ၏အသံဖမ်းရွှေ့ဆိုင်းရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်. ဒါပေမယ့်အပေါ်7ဇန္နဝါရီလ, မိမိအမွေးနေ့မတိုင်မီတစ်ရက်, သူကအနက်ရောင်တွင်းအပေါ်ဆွေးနွေးချက်ကိုအပ်, သူတို့နှင့်အတွင်း၌ကျရောက်ကြောင်းအချက်အလက်များ၏ကံကြမ္မာ, တော်ဝင် Institution မှမှာ 400 အားကြီးသောပရိသတျမှ (ri) Mayfair အတွက်, လန်ဒန်.
ကြယ်တို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆွဲငင်အားအောက်မှာနျူကလီးယားလောင်စာနှင့်ပြိုကျထဲက run သောအခါက Black တွင်းဖွဲ့စည်း. ယခင်ကခေါ် "အေးစက်နေတဲ့ကြယ်များ", ထိုထားသောစာပိုဒ်တိုများအတွက်စတင်သုံးစွဲခဲ့ကြသောအခါထိုသူတို့ကျယ်ပြန့် "တွင်းနက်" အဖြစ်လူသိများခဲ့သည် 1967 အရူပဗေဒပညာရှင်ဆရာယောဟနျ Wheeler ကအားဖြင့်. အချို့သောအချိန်များအတွက်, ပြင်သစ်ကညစ်ညမ်းသောသောမြေပေါ်တွင်နာမတျော၏ပြောင်းလဲမှုကိုခုခံ, ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလိုင်းသို့ကျဆင်း, ဟော့ကင်းကပြောပါတယ်.
Related: စတီဖင်ဟော့ကင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်အားထက်ကျော်လွန်ဂြိုလ်သားအသက်အဘို့ $ 100 ရှာဖွေရေးလွှတ်တင်
ထိုဟောပြောပွဲစဉ်အတွင်း, ဟော့ကင်းကအခြားစကြဝဠာမှာအနက်ရောင်အပေါက်ထဲသို့ပြုတ်ကျပေါ်ထွက်လာဖို့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်မည်အကြောင်းပြောဆိုသော. ဒါပေမဲ့သူကတစ်ဦးကြီးများဖြစ်ဖို့ရှိသည်မယ်လို့သူကဆက်ပြောသည်, အနက်ရောင်အပေါက် spinning, ပြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝဠာကိုမှပြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး. အဆိုပါဟောပြောပွဲဘီဘီစီရေဒီယိုအပေါ်အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုအတွက်ထုတ်လွှင့်ကြလိမ့်မည်426 ဇန်နဝါရီနဲ့ 2nd ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်မနက်9နာရီမှာ.
အ Ri မှာမိမိစကားပြောစုပေါင်းအားဖြင့် Speaking, he answeredaquestion on whether the electronic voice had shaped his personality, perhaps allowing the introvert to become an extrovert. Replying that he had never been called an introvert before, Hawking added: “Just because I spendalot of time thinking doesn’t mean I don’t like parties and getting into trouble.”
20520	2 အပိုဒ်, ဘီဘီစီ, Black holes, မှ Ian နမူနာ, အဓိကအပိုင်း, ရူပေဗဒ, ရေဒီယို 4, သိပ္ပံ, အာကာသ, စတီဖင်ဟော့ကင်း, အုပ်ထိန်းသူ, ဗြိတိန်သတင်း
← စက်ရုပ်သေချာသလောက်ကျော်ထဲက Knock တော်မူမည်5သန်းဂျော့ဘ် [Bloomberg] 15 သင်က Google ကိုထဲသို့ရိုက်ထည့်ပါနိုင်သလားဒါကရယ်စရာအရာ →